DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo Guddi u saaray baaritaanka cidii ka dambeysay dilkii Taliyihii Qeybta Booliska G/Hiiraan
June 12, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 2
Waxaa Eebbe mahaddii ah in sida dhammaan baraha bulshada iyo warbaahiyeyaasha laga dareemayo ay beelweynta Hawiye, gaar ahaan reer Banadir iyo Mudduloodku, qummaati ugu qaboojiyeen dhagartii halista ahayd ee ay Habar Gidirtu dalka u maleegeysay. Waxaan hambalyo iyo boogaadin u khaas ah hawada u marinaya beesha Abgaal iyo tolkooda kale ee qarannimada ka doortay qabyaaladda ay Habar Gidirtu magaca Hawiye ku hurinayaso oo mawqif adag na iska taagay.
Hawiyaha waxaa magaca ka afduubtay Habar Gidirta sida Isaaqa magacoodu ay uga afduubteen reero ay bahashu si xun u sumeysay oo labadani waxay wali cabsan yihiin qaddiyadihii Cigaal iyo Caydiid ee ay shayaaddiintu ugu waxyoodeen in ay qarannimada dalkeena Soomaaliya ku curyaamiyaan oo sha’niga Soomaaliyeed na shimbirka kaga dilaan. Waxaa na sida hadda ba caddaatay ay ku hoos wateen dhagar dhul iyo hanti boob ah ee lala fahmay. Dawladda Federaalku haddii ay sameysan lahayd idaacad tayo sarreysa waxay ku guuleysan lahayd in ay kuwa naanka laga qalday xaqa iyo runta garawsiiso oo nacabkan sokeeye kaga soo dhacsato.
Wax gudi loo saaray xal lagama gaadho… Xaar maajo, waxa uu qirtay in aanu talo gacan ku hayn marti u yahay Hawiye . USC.